TTSweet: Clay pot sesame chicken wing (မြေအိုး ကြက်တောင်ပံပေါင်း)
Posted by T T Sweet at 11:08 AM
Labels: (၄ ၀၀) စင်္ကာပူမှ အစားအသောက်များ, (၄- ၂) မြေအိုး ကြက်တောင်ပံပေါင်း
Evy August 26, 2011 at 12:04 PM
Thandar Lwin August 26, 2011 at 12:05 PM
နက်ဖြန် သေချာပေါက် ချက်စားမှာ ဟိ ။
ပိတ်ရက်ကို ဘာချက်စားရမလဲစဉ်းစားနေတာ အတော်ဘဲ ဖြစ်သွားတယ်။
မြူးမြူး August 26, 2011 at 4:02 PM
မနက်ဖြန်ချက်စားစရာတော့ရပြီ.. ကြက်တောင်ပံတွေလဲ ရှိနေတာနဲ့ အတော်ပဲ..း)
Seems so yummy, Ma Ma. As much as I want to try it at home, I have to let go of that thought as I don't have most ingredients, especially the clay pot, hehe.
ချစ်ကြည်အေး August 26, 2011 at 7:33 PM
စားချင်စရာကြီးးး ကြက်တကောင်လုံးမှာ ဖင်စီဗူးပြီးရင် တောင်ပံက အဆီများဆုံးတဲ့အေ့....။ ဟီးဟီး ခဏရှောင်ဦးမယ်....နောက်လ ခရီးသွားဖို့ရှိလို့ မတ်စိရေ...:))
Delay to cook according to Ma Chit's comment:)
(Yummy)3...say looking at my tummy:D
mstint August 27, 2011 at 1:25 PM
မြေအိုး ကြက်တောင်ပံပေါင်း နည်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ စွိတီရေ။
အောက်ဆုံးပန်းကန်ကိုကြည့်ပြီး ဗိုက်ဆာသွားတယ်း)
အလုပ်က NUSနဲ့နီးတော့ နေ့လည်စာသွားစားဖြစ်တယ်။
"ကုလားစာဆိုရင်တော့ Engineering ကင်တင်းမှာ အလွန်ကောင်း။" သဘူတောတယ်။
Science And Artsက အဲဒိဆိုင်မှာ သွားတိုင်းစားဖြစ်တာက braised pig trotter၊ ဗန်းထဲက ကြက်ဥမွှေကြော်လေးပါ ထပ်မှာပြီး လွေးတာပ...
စလုံးမှာမနေဖြစ်တော့ရင် စလုံးအစားအစာတွေ လွမ်းအုံးတော့မှာ အမှန်ပဲ...
Turn On Ideas - TOI
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) August 27, 2011 at 4:09 PM
ကြည့်ရင်းနဲ့ စားချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာစေတယ်
Sonata Cantata August 28, 2011 at 2:47 AM
တို့လည်း Lee Kum Kee ပဲ
အိမ်မက်စေရာ August 28, 2011 at 9:53 PM
တီဆွိ ဂလု.. ( တံတွေးမြိုချသံ)... စားချင်တယ် စားချင်တယ်..
San San Htun August 29, 2011 at 2:30 AM
စားလို့ကောင်းမှာ သေချာတယ်...Business School မှာ စားစရာတွေ မကျန်တော့ရင် စန်းထွန်းတို့ တွေ Art & Science ကို ချီတက်ကြတာပေါ့..သူတို့ လည်း ကုန်းဘောင်ကြီး၊ မာလာကြီးလို့ခေါ်တယ်...အဲဒီက steam boat က ဈေးလည်း သက်သာပြီး စားလို့ လည်းအရမ်းကောင်းတယ်...း)
Mo August 29, 2011 at 5:57 PM
Yesterday I bought all the required ingredients and clay pot. Today I tried your recipe.
Oh! Yummy ....Yummy.... Yummy..
TZH1985 August 30, 2011 at 2:12 AM
just come to visit :)